Ny OTA-14 vaovao dia ho tara tara indray, fa ho avy ... | Ubunlog
Ny OTA-14 vaovao dia ho tara tara indray, saingy ho avy ...
Aorian'ny Thanksgiving any Etazonia, mpitantana ny tetikasa Ubuntu Touch, Lukasz Zemczak, dia nitatitra fanemorana vaovao amin'ny fanavaozana lehibe farany ny tobin'ny tetik'asa.
vaovao OTA-14 dia ho tonga mandritra ny herinandro voalohan'ny Desambra ary tsy amin'ny faran'ny volana novambra araka ny kasaina hatao. Raha heverintsika ihany koa fa miadana ny fahatongavana dia tsy hahazo ny OTA-14 vaovao ny fitaovana sasany raha tsy ny 7 na 8 desambra.
Amin'izao fotoana izao ny OTA-14 dia mivaingana ary misy ao ilay fantsona naroson'ny rc. Amin'izao fotoana izao, ity kinova iray manontolo ity dia eo am-pandinihana mba hanamboarana bibikely izay mety hiseho. Anisan'ireo zava-baovao amin'ny OTA vaovao ananantsika ny fahatongavan'i kisary birao, fiaviana mihetsika ary mpitantana andraikitra izany dia hahatonga ny nostalgic indrindra amin'ny Android tsy ho diso izany.
Ny OTA-14 vaovao dia hampiditra sary masina ao amin'ny birao finday
Ho fanampin'izany dia misy ny fanitsiana mitohy ny hadisoana sy hadisoana mety ananan'ny rindrambaiko. Zavatra ilaina mba hiasa tsara ny rafitra fiasa nefa koa hialana amin'ny tsy ampoizina aorian'ny fampiasana taona maro. Amin'izao fotoana izao dia izao no mitranga amin'ireo mpampiasa Android izay tsy maintsy manavao tsy tapaka ny rafitra fiasa.
Ireo mpampiasa manana finday miaraka amin'ny Ubuntu Phone avy Tetikasa UBPort Tsy maintsy miandry ela kokoa ianao vao hahazo ilay fanavaozana vaovao, satria ny tetikasa dia tsy eken'ny Canonical ary ny kinova ofisialy dia tsy maintsy alefa aloha hampifanaraka azy amin'ny finday mifandraika amin'izany.
Na izany na tsy izany dia toa ny Ubuntu Phone sy Ubuntu Touch, ilay tetikasa ankapobeny, tohizo miaraka amin'ny ho avy mahafinaritra saingy indrisy fa sarotra ny mahazo azy (farafaharatsiny farafaharatsiny ofisialy), tsy misy finday azo vidiana na farafaharatsiny asehon'ny tranonkala Ubuntu.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ny OTA-14 vaovao dia ho tara tara indray, saingy ho avy ...
Klaus Schultz dia hoy izy:
Ny fanemorana mandrakizay an'ny Canonical. Toa hafahafa, saingy mbola matoky aho fa hiaina hahita ny fiarahan'izy ireo malaza zato isan-jato. Ny fotokevitry ny Ubuntu Phone sy ny Unity 8 dia tsara sy tsotra, antenaina fa hiasa tsy ho ela.
Valiny tamin'i Klaus Schultz
Federico Garcia dia hoy izy:
Eny, hiandry isika.
Valiny tamin'i Federico García
Ilaina tokoa fa ity hetsika natombok'i Firefox OS haingana ity tamin'ny mpandraharaha samihafa tamin'ny taona nahaterahany dia manomboka ataon'ny Canonical.
Ny rafitra dia efa matotra kokoa, manome antoka ny amin'ny fampiasana sy ny tombony feno izy, ny fifanarahana amin'ireo mpandraharaha isan-karazany dia hahatratra fitomboan'ny mpampiasa, ary raha misy ny mpampiasa dia hisy ny fampiharana haingana ... ... ary raha misy dia fampiharana, hisy mpampiasa bebe kokoa.
Alduin, mpamaky rss handresy azy rehetra
Ubuntu dia handà ny SHA-1 ao amin'ny APT manomboka amin'ny Janoary 2017